सामसु Galaxy ग्यालेक्सी M20 आरक्षण अवधि स्पेन मा खुल्छ Androidsis
तपाईं अब स्पेनमा ग्यालक्सी M20 आरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ
सामसुले जनवरीको अन्त्यमा आफ्नो नयाँ मध्य-दायरा प्रस्तुत गर्‍यो, ग्यालक्सी एम को। यसमा हामी दुई मोडेलहरू फेला पार्दछौं, ती मध्ये एउटा ग्यालक्सी एम २० हो, कि आगमन सम्म गैलेक्सी एमएक्सएनएमएक्स हालै यो कोरियाली ब्रान्डको मध्य-दायरा भित्रमा सब भन्दा शक्तिशाली मोडल थियो। केही हप्ताको लागि यो भनिएको छ कि युरोपमा यस मोडेलको आगमन निकट छ.
तर अब यी अफवाहहरू एक कदम अगाडि जान्छ र साँचो हुन्छ। किनकि अब यो ग्यालक्सी M20 लाई आधिकारिक रूपमा स्पेनमा रिजर्भ गर्न सम्भव छ। मध्यरातमा यसको मूल्यको चुहावट थियो, तर विगतको दिउँसोदेखि यो तपाईको आरक्षण सम्भव छ धेरै स्टोरहरूमा, जस्तै अमेजन। हामीसँग पहिले नै यसको मूल्य छ। यो फोन कत्तिको मूल्यमा पर्ने छ जब यो स्पेनिश बजारमा सुरू गरिएको छ?
यो लोकप्रिय वेब PCcomponentes मा भएको छ जहाँ यो मध्य-दायराको मूल्य हेर्न सम्भव भएको छ, फोन सुरक्षित गर्ने सम्भाव्यता सार्वजनिक हुनु अघि। यस दायराको सब भन्दा उल्लेखनीय विशेषता भनेको यो हो कि यो सामसु inमा देखिने भन्दा कम मूल्यको साथ आयो। तसर्थ, यो जान्न रोचक छ कि यदि यो स्पेनमा आफ्नो प्रक्षेपण जारी रहन्छ भने।
स्पेनमा यस ग्यालक्सी एम २० को मूल्य २२eयूरो हुनेछ। कुनै श doubt्का बिना, मध्यम दायरा भित्र एक राम्रो विकल्प, विशेष गरी जब यो ठूलो ब्याट्री छ। स्पेनको मामलामा, फोनको संस्करण मात्र GB जीबी र्याम र GB4जीबी आन्तरिक भण्डारणको साथ सुरू हुन्छ।
स्पेनमा यस ग्यालक्सी एम २० को आरक्षणको साथ, हामी अन्ततः यसको सुरूवात मिति हेर्न सक्षम भएका छौं। उही डिलीवरी मार्च ११ को लागि निर्धारित छ। त्यसकारण, यो आशा गरिएको छ कि यस मितिबाट, तपाईं स्पेनको बाँकी पसलहरूमा पनि आधिकारिक रूपमा किन्न सक्षम हुनुहुनेछ।
हामी कुर्छा सामसु fromबाट कुनै पुष्टिकरण रिलीज मितिमा भने। तर यस ग्यालक्सी एम २० मा रुचि राख्नेहरूको लागि, उनीहरूले यसलाई आधिकारिक रूपमा आरक्षण गर्न सक्दछन् यो लिंक. यस मध्य-दूरी स्पेनको आगमनको बारेमा तपाइँ के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » तपाईं अब स्पेनमा ग्यालक्सी M20 आरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ
HTC ले आफ्नो ब्रान्ड लाईसेन्स गर्ने योजना गर्दैछ
मंगा नायिकाको लागि एक MMO: अलिता, लडाई परी